Home EGO AFRICAN FOOTBALL Naby Keita Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of Football Genius onye kasị mara aha; "Rough Diamond". Nwa Naby Keita Akụkọ nke a na-eme ka ị nweta akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke ndị na-agba ọsọ ndụ na ndị Guinea na Akụkọ Ochie gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Akụkọ Naby Keita na-adọrọ mmasị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe omimi. Ọ bụ akụkọ banyere nwatakịrị nwoke dara ogbenye site na Conakry, isi obodo Guinea na West Africa onye mgbe amụrụ ya, ghọrọ onye a gọziri agọzi site na talent pụrụ iche. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Nwa Naby Keita Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, aha ya zuru oke Naby Laye Keïta. A mụrụ ya na 10th ụbọchị nke February 1995 na nne ya, Miriam Camara na nna, Sekou Keita na Conakry, Guinea.
Ozugbo Keita nwere ike ịga ije nne ya, Miriam Camara malitere ịnapụ ngwongwo n'ụkwụ ya. Dị ka nna ya, Sekou Keita si kwuo, Naby nwere nwata na-eto eto na-ekpebi ọdịnihu ya ozugbo ọ gafere nwata.
Dị ka Naby Keita si kwuo okwu ọnụ ọchị;
“Mama m gwara m na ihe ọ bụla ga-esi na tebụl ahụ da, ma ọ bụ kalama mmiri ma ọ bụ oroma, m ga-ata ya.
Ihe obula di n’elu ulo nke m nwere ike igba, aga m ebu ụzọ mee onwe m obi uto. N'agbanyeghị ebe ọ ga-akpọrọ m, m ga-eme nke a. ”
N'oge ahụ ọ bụ nwatakịrị, ọ na-achọkarị bọl gburugburu ya. A hụrụ Naby Keita dị ka onye ihere, nwa agbọghọ dị jụụ mana nke nwere ume.
Naby Keita Bio - Mmụta Vs Football:
N'oge ahụ dịka nwatakịrị, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na Naby Keita ga-achọ ịchụso ọrụ na football.
Agbanyeghị, ndị mụrụ ya gbalịrị iduzi ya gaa n'ụzọ dị iche iche na-atụle eziokwu ahụ bụ na belụsọ n'oge obere oge, bọọlụ bụ naanị maka ndị ọgaranya na njikọ na Guinea.
Ndị mụrụ ya, Sekou na Mariam chọrọ ka nwa ha mụọ. Ha chere na agụmakwụkwọ kachasị mkpa ma dị mma.
Naby gbasoro ọchịchọ ha ma gbalịsie ike na-enyocha ule na ụlọ akwụkwọ. O doro anya, ọ dịghị ihe ọzọ dị n'isi ya ma football. Nne na nna ya gbalịrị gbalịa, ma ha nwere ike ịhụ nwa ha nwoke hụrụ akwụkwọ ya n'anya.
N'oge ụfọdụ, onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ Keita (ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị, nwanne nna ya, nwanne ya na ndị ọzọ) kwadoro ọchịchọ ya maka ịgba bọl. Ndị mụrụ ya n'oge a enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị inye ya nkwado ha n'ihi na ha hụrụ nwa ha nwoke, ihe egwuregwu football.
Naby Keita Biography Eziokwu - Ndị Liverpool Kpọtụrụ:
Na 12, ndị na-agụ obodo na-adụ Naby Keita ọdụ na talent ya nwere ike ịdata ya na Europe.
Otú ọ dị, echiche dị otú ahụ karịrị nke ukwuu maka onye na-eto eto dị ka ya ịhazi dịka ọ na-adịghị njikere n'uche maka nnukwu nzọụkwụ ahụ.
N'oge ahụ, nanị iru ya na Europe bụ ịga ileta ebe a na-elele ọtụtụ Ligue 1, Njikọ Njikọ na Premier League na TV.
N'ịchọ ịlụso ịda ogbenye ọgụ na ezinụlọ ya, Naby Keita ga-etolite nkwenye na ọ ga-egwu egwuregwu otu ụbọchị na Europe.
O kpebisiri ike ịghọ ndị na-agba ọsọ, ọ bụghị naanị n'ihi na ọ hụrụ egwuregwu ahụ n'anya, mana n'ihi na ọ chọrọ igboro ndị ezinụlọ ya na ndị ikwu ya.
Naby Keita, dị ka n'oge ahụ yi uwe elu nọmba 10 maka ụlọ ọgbakọ ya na Koleya, Guinea.
Naby Keita ji ihe ọ bụla o nwere egwuri egwu na mgbe ụfọdụ, ọ ga-eyi akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ ochie mebiri emebi dịka onye otu ibe ya ga-eme (lee foto dị n'elu).
N'oge ahụ, ha ga-eji obere ubi ọ bụla na-egwu bọlbụ n'agbanyeghị na ọ pụtara igwu egwu n'okporo ụzọ na ịnya ụgbọ ala n'okporo ámá nke Guinea. N'okwu ya;
"Anyị ga-egwu ebe ọ bụla enwere oghere, nke na-adịkarị n'okporo ámá ma anyị ga-agba ụgbọ ala !.
Akpọrọ m ọtụtụ ugboro, mana m nọgidere na-aga n'ihi na achọghị m ịhapụ. Ọ dịghị ihe nwere ike ikewapụ m na bọọlụ na m mụtara ọtụtụ ihe site na ahụmahụ m n'okporo ámá.
Ikike igwu egwu na-enweghị football akpụkpọ ụkwụ na ndị na-eme ihe nchebe nyere aka na ihe mere Naby Keita enweghị egwu n'egwuregwu egwuregwu. Ka ọ na-etinye ya;
"Enweghị m akpụkpọ ụkwụ na uwe mwụda aka ndị e nyere m. Enwere m obi ụtọ na nke a enyerela m aka ịkwado maka ihe ọ bụla ugbu a dika ọkachamara. Taa, anaghị m atụ egwu ihe ọ bụla dị na pitch. "
Naby nwere ọganihu na ọrụ obodo ya ka ọ na-enweghị uwe elu. N'oge ahụ, ndị otu ya (Horoya) ga-eyi uwe Liverpool.
Obi abụọ adịghị ya, a mụrụ ya ka ọ ghọọ ọbara ọbara dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru (Nke abụọ gaa n'aka ekpe).
Mgbe ị na-ele foto a, o siri ike ikwere na Naby ga-eto ogologo. Agbanyeghị, mara mma ihu, ọ gbanweghị ọtụtụ.
Dị ka a hụrụ na foto dị n'elu, Naby Keita bụ otu n'ime ndị pere mpe n'etiti ndị otu ya na ọbụlagodi mmegide ya.
N'ịbụ onye kasị nta pụtara na ọ ghaghị ịlụ ọgụ maka ihe niile; ohere igwu egwu na inweta nkwanye ùgwù site na nnukwu ndị egwuregwu. Nke a dugara ya iwe, dị ka ụzọ isi gosipụta na ọ dị obere ma dị ike.
Naby Keita Untold Biography Eziokwu - toga France:
Na 16, Naby jupụtara na ịnụ ọkụ n'obi nke European football mana ejighị n'aka ihe ga-atụ anya ya.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ, ọrụ ebube mechara bịa, a kpọrọ ya maka ule site na otu ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ French site na ụfọdụ ndị French scouts bịara ileta mba ahụ.
Ebe ọ bụ na ha enyeghị ya ọrụ nkwekọrịta ọkachamara nke ndị ego metụtara, nne na nna ya na ndị ikwu ya nwere mgbagwoju anya. Dị ka Naby Keita kwetara;
“Ha achọghị ka m gaa ebe dị anya, ha nọ na-echegbu onwe m banyere otu m ga-esi mee ka ebe ọhụrụ a mara m ahụ. Ha mechara chọpụta na ọ bụ mmeri nye ezinụlọ, megide ịda ogbenye ”
France siri ike karịa ka Naby chere n’echiche dịka ihe niile belụsọ asụsụ dị iche.
N'oge ahụ n'ala nna ya, a na-eji Naby eso ndị enyi ya egwu bọl. N'oge a, ya na ndị bịara abịa na-adịghị achị ọchị ma ọ bụ soro ya gwuo egwu kama ọ na-achọkarị ịnọrọ onwe ha.
Naby Keita jụrụ Akụkọ:
Mgbe ya na ndị otu na-azụkọ ọzụzụ, onye nkuzi ya gwara ya ka ọ mee ihe ọ na-anụghị.
Ejiri otutu okwu bọọlụ mee ihe nke Keita enweghị ike ịghọta ma ọ bụ enweghị nghọta banyere ya. Nke a bụ isi ihe kpatara ịkwa emo na ịjụ ndị otu ya nke mere ka ọ nọrọ naanị ya ma nwee mwute.
Na nzaghachi nke a, Naby Keita kwagara n'agbata Conakry, Guinea na France, bụ ebe ịjụ ndị ọrụ ibe ya na France ji nwayọọ nwayọọ rie nri. Nke a bụ oge Naby gwara onwe ya;
Ka m chere na a jụrụ m, echere m ma m ga-eme ya. Ọ bụ n'ezie oge siri ike.
Keita kwuru wee gaa n'ihu…
Ị nwere nrọ gị n'ime ebe dị nro, mgbe ahụ ọ dabara, ị ga-amalite site na mmalite ọzọ.
Na Naby Keita, ihe ijuanya banyere oge ọ jụrụ ya abụghị banyere ya ịnọ na-amaghị ama ma ọ bụ na-ese okwu na ọdịiche dị iche iche nke French ma ọ bụ ndị otu na ibe ya ma a na-asụgharị football kpam kpam. Ka ọ na-etinye ya;
"A naghị ekpughere m n'akụkụ egwuregwu nke egwuregwu ahụ. Adịghị m etolite na agụmakwụkwọ na ihe niile m maara bụ si n'okporo ámá ebe m ga-enweta bọl, soro ya, gosi ụfọdụ nkà, egwu egwu na akara.
Mgbe ọ nụrụ banyere nsogbu ya, ndị mụrụ ya nwere nnọọ nchegbu maka nwa ha nwoke. Keita ga-akpọ ha ugboro isii n'ụbọchị iji gwa ha na ihe niile ga-adị mma.
Imeri Oke ya:
N'ikpeazụ, Naby Keita mụtara ụzọ ndị na-eme egwuregwu European na-ahụ ya dị ka ndị na-eme egwuregwu dị mkpa nke ọma ma na-agbachitere ma na-agbachitere maka ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ French.
Ewezuga imuta uzo Afrika ya, o gha agha ugbua, weghachite ndi na-agbachitere ya, gbochie ya, gbanwee egwuregwu a, gbanwee ngwa ngwa, wepu ma obu mebie ndi mmegide ma kwuo oge ya. Ọ bụ ihe pụrụ iche, nke bara uru nke ụdị African na European.
Naby Keita Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Naby n'oge a kara nkata iji malite ọrụ agadi ya. Le Mans, onye choputara Didier Drogba si Ivory Coast bụ ụlọ ọrụ mbụ na-ebute ikike Keita dị elu ma ha enweghị ike iwe ya na 18 ka ha nọ na njedebe nke enweghị ego.
Otu onye ọrụ ha tụrụ aro ka “siri ike diamond”Na onye Sporting Director nke ọzọ club, FC Istres.
Mgbe ha nyochachara nke ọma, klọb dị na ndịda France iji dozie ikpe. N'ụzọ dị mma, nke Naby nwere mmetụta ozugbo ma bụrụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ka Keita tinye ya;
Enwere m ogologo oge. N'agbanyeghị na enwere m ọtụtụ nsogbu, enwere m ohere mbụ m gosipụtara na m nọ na Europe
Ọ bụ ihe siri ike maka FC Istres ka Keita nọgide na-enweta ọtụtụ nkwụsị ọnwụnwa. Mgbe obere oge gasịrị, ụlọ ọrụ ahụ rere ya na Red Bull Salzburg ebe o zutere ma ghọọ ezigbo enyi Sadio Mane (afọ atọ agadi ya) bụ onye mechara kwaga Southampton.
Mgbe ọ bịarutere na klọb ahụ, Keita zutere asọmpi. O kpughere.
“Na mbụ, anaghị m amalite ma ọ na-ewe oke iwe. Enweghị m mmasị na ya ma mee ka nhazi oge ahụ sie ike karị.
ma Sadio ezigbo enyi m gwara m 'Nwanne m nwoke, nọrọ jụụ. Ohere gị ga-abịa ma ọ bụrụ na ọ mee, ị ga-eji ya mee ihe kachasị. '”
Sadio Mane nyeere Keita aka na ihe niile - asụsụ, imeta ndị enyi, nghọta klọb na obodo ahụ. N'okpuru ebe a bụ foto nke ndị enyi mgbe ị nọ na Red Bull Salzburg.
Ma, n'ezie, Mane ziri ezi dị ka ezigbo enyi ya Ozugbo Keita mechara nweta ohere ya na ndị otu mbụ.
Keita alaghị azụ igosipụta àgwà ya mgbe ohere ruru na ihe niile gara nke ọma.
Ọtụtụ onyinye na-abịa ọzọ na Keita kwagara RB Leipzig ebe ọ ghọrọ ndị otu na ezigbo ndị enyi Timo Werner.
N'ịchọ ka ya na enyi ya dịghachi, Sadio Mane kwenyesiri ike Jurgen Klopp banyere Keita na Klopp kwetara ime ka ọ gaa England iji kpọọ Liverpool. Ndị enyi abụọ ahụ mechara dịrị n'otu.
Akwụkwọ Naby Keita na-agha ụgha - Akụkọ ahụ:
Na September nke 2017, a boro Ke ,ta ebubo na ọ bụ pping 415,000 n'ihi akwụkwọ ụgha dị ka akwụkwọ akụkọ German si kwuo. Ọ bụ banyere ikikere ọkwọ ụgbọ ala ya.
Naby Keita gara ụlọ nke Africa Guinea iji kwadebe akwụkwọ ikike ọkwọ ụgbọala adịgboroja iji nweta akwụkwọ ikike ọkwọ ụgbọ ala ọzọ na Germany. O di nwute, ejidere ya site na mmekorita ndi isi na ndi obodo ya (Guinea) na Germany.
Ụlọikpe dị na Leipzig (Amtsgericht Leipzig) dabere na ikpe ya na ego netwọta Keita nke ihe dị ka nde euro atọ kwa afọ. Na ịgbachitere, ndị ọka iwu Keita gbara akwụkwọ arịrịọ megide iwu ntaramahụhụ nke hụrụ na nhatanha belatara € 250,000 (£ 220,000).
Naby Keita Ezigbo Ezinụlọ:
Mgbe Keita gbara gburugburu 11 ma ọ bụ 12, a kpọrọ ndị enyi ya na ọbụna nna ya Deco n'ihi na ha chere na ọ na-egwuri egwu dika nke mbụ Chelsea na FC Barcelona. Dị ka Naby Keitan
“Achọrọ m ịbụ Deco, Titi Camara ma ọ bụ Pascal Feindouno mgbe m dị obere, ugbu a, e nwere ụmụaka ndị aha m nọ n’azụ uwe elu ha!
Nke ahụ bụ nnukwu ihe mkpali nye m ma enwere m olileanya na m ga-aga n'ihu igosi ha na iji obi ike na mkpebi siri ike na ha nwere ike nweta ihe ọ bụla "
Nna Naby Keita bụ nnukwu onye Liverpool! ọ na-ekpughe. Laa azụ dị ka o nwere ike icheta, papa ya were iwe banyere klọb ahụ tupu Keita amatala ihe Liverpool bụ dị ka nwatakịrị. Ihe ọmụma Naby Keita banyere Liverpool malitere n'oge Steven GerrardỌchịchị ya na ncheta afọ 2005 nke Istanbul.
Nne Naby Keita na-abịakarị kwa ọnwa atọ ọ bụla ileta ma soro nwa ya nwoke nọrọ. Dị ka Naby Keita kwuru;
"Ugbu a, ọ ghaghị iti mkpu n'ihi m maka ịgba ihe niile gburugburu, ma ọ ka bụ nkume m. Enweghị m ihe ọ bụla na-enweghị ezinụlọ m, n'agbanyeghị ihe merenụ, Agaghị m echezọ ebe m si bịa. "
Mgbe ọ laghachiri n'ụlọ;
“Mgbe m laghachiri na Conakry, ụmụaka ka na-egwuri egwu n'okporo ámá na-enweghị akpụkpọ ụkwụ, na-agbara ụgbọala ndị ahụ ọsọ.
M na-azụta akpụkpọ ụkwụ mgbe m laghachiri maka ọtụtụ ụmụaka ka m nwere ike n'ihi na amaara m otu ọ nwere ike isi nweta ihe dị mfe. E nwere ọtụtụ nkà na nkà na Guinea, o juputara na nganga. ”
Olileanya maka ọbịbịa
"Ọ dịghị mkpa na ị dara ogbenye, ma ọ bụ ebe ị si bịa, ọ bụrụ na ị dị njikere ịchụ àjà, dị njikere ịrụsi ọrụ ike ma ghara ịkwụsị ịlụ ọgụ maka nrọ gị, i nwere ike ime ka ha mee."
A na-akọwa Keita dịka onye na-agbanye obi ike, onye na-edebanye igbe na-edeba igbe. O nwekwara ike kesaa bọl ahụ na njiri ziri ezi, na-ebute ihe mgbaru ọsọ ugboro ugboro ma e jiri ya tụnyere N'Golo Kanté na Mma.
Keita gara n'ihu na-abanye n'ime 2017 Goal 50, nke na-eme ka ndị 50 kasị mma egwuregwu n'ụwa nke afọ gara aga
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Naby Keita Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.